छारे रोग के हो ? किन लाग्छ ? र, यसबाट बच्ने तरिकाहरू के–के हुन् ?
विराटनगर, २४ भदौ । छारे रोग एक किसिमको मानसिक रोग हो । यो रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशुसमेतमा देखा पर्ने गर्दछ । यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने, तथा अंग्रेजीमा इपिलेप्सी आदी विभिन्न नामहरूले चिन्ने गरिन्छ ।
प्रायः जसो कमजोर दिल भएका व्याक्तीहरूलाई छारे रोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिए पनि मस्तिष्कमा भएका न्युरो ट्रान्सिमिटर असन्तुलित भएमा छारे रोग लाग्ने गर्दछ । सामान्य भाषामा मस्तिष्कका नसामा आउने गडबडीका कारण शरीरमा देखिने समस्यालाई छारे रोग भनिन्छ ।
यो रोग लाग्ने रोगीले कहिले कतिखेर र कहाँ लाग्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्दैन । तर, धेरै मानिसको भिड, रंगी विरंगी लुगाकपडा देख्दा, आँखा तिरमिराउने घाम, नदीको पानी र तीब्र आवाजमा रहेको धुन सुनेपछि यो रोगका रोगीहरू अचानक बेहोस् अवस्थामा भएर लडेको देखिन्छ । वीर अस्पतालका न्युरोलोजिस्ट डा. सुनिल कोइरालाका अनुसार यो रोग पहिलेदेखि थियो तर, पछिल्लो समय धेरै नै बढेको देखा परेको छ ।
मस्तिष्कमा चोटपटक लागेर रक्तश्राव भएमा छारे रोग लाग्छ भने कतिपयलाई वंशाणुगत कारणले पनि यो रोग लाग्छ । जन्मजात मस्तिष्क विकलांग भएर जन्मिनेहरूमा पनि छारे रोग लाग्छ । एक किसिमको छारे रोग जुन बच्चालाई लाग्यो भने केही क्षणका लागि मस्तिष्कले केही थाहा नपाउने हुन्छ र यस्तो दिनमा सयौं पटकसम्म पनि हुन सक्छ । आठ, नौ वर्षका बच्चालाई छारे रोग लाग्यो भने उनीहरूको पढाइ कमजोर हुँदै जान्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका न्युरोलोजी विभाग प्रमुख डा. राजेश कर्णका अनुसार यो रोग विभिन्न कारणले लाग्ने भए पनि पछिल्लो समय मस्तिष्कमा नाम्ले जुका, खानपानमा ख्याल नर्पुयाउने तथा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका कारण बढेको हो । यो रोग लागेपछि केही मिनेट या सकेन्डका लागि मानिस बेहोस् हुने, काम्ने, मुखबाट फिँज आउने, जिब्रो टोक्ने, वान्ता हुने, मुर्छा पर्ने, लल्याकलुलुक हुने, केही थाहा नपाउने जस्ता लक्षण देखा पर्नुका साथै दुर्घटनासमेत निम्तिन सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा धेरै जनाले मोजा तथा जुत्ता सुघाइँदिने गरेको देख्न सकिन्छ । कतिपय पिछाडिएको समाजमा छारे रोगको लक्षण देखा पर्दा जथाभाबी जडीबुटी खुवाउने तथा धामी झाँक्री लगाउने चलन पनि चलिरहेको छ । चिकित्सका अनुसार यी सबै गलत उपचार हुन् । न्युरोलोजिस्ट डा. कोइरालाले कामेर मुर्छा परेका बेला बिरामीलाई खुला ठाउँमा बायाँ कोल्टो पारेर सुताउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् ।
छारे रोगबाट बच्नका लागि उमालेको वा निर्मलीकरण गरेको शुद्ध पानी मात्र पिउने, काँचो साग, सलाद, फलफूल राम्रोसँग पखालेर मात्र खाने, खाना सफा र पाक्नेगरी पकाउने, ठीक समयमा सन्तुलित खाना खाने गर्नु पर्छ । साथै, समयमा सुतेर निन्द्रा पुगाउने, तनाब कम लिने, टाउकोमा चोटपटक लाग्न नदिने, ज्वरो आउँदा तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा समयमै उपचार गर्ने गर्दा केही हदसम्म छारे रोगबाट बच्न सकिन्छ ।